Igwefoto abụọ na mkpebi 4K maka Samsung Galaxy S8 ọzọ | Gam akporosis
Mgbe anyị ka dị nke nnukwu omume ọma masịrị gị Site na Galaxy S7 na S7 ihu, asịrị banyere Galaxy S8 ọhụrụ na-amalite ịkụ aka n'ọnụ ụzọ ka anyị wee hapụ ha wee malite ịrọ nrọ banyere ihe ekwentị ọzọ na-esote onye nrụpụta Korea ga-abụ. Ngalaba nke ekwentị ahụ ị nwere dị ka ihe dị ịtụnanya, nke mere na n'ụbọchị, na asịrị ọhụrụ banyere nke na-esote, ị ga-enwe mmetụta na ọ pere mpe.
Banyere Galaxy S8 anyị nwere asịrị ọhụrụ nke na-etinye anyị n'ihu ekwentị a, nke ga-abata na February n'afọ ọzọ, nke a ga-enwekwa Igwefoto igwefoto abuo Na azụ. Mmelite na foto nke SEMCO ga - emepụta ma mepụta ya, akụkụ nke Samsung Motors.
Na ịrị elu na ewu ewu na nke mebere eziokwu ma ọ bụ VR, na Samsung Galaxy S8 na-atụ anya iru a 4K ihuenyo mkpebi (2160 x 3840). Ihuenyo dị ka nke ahụ ga-eche na ọ ga-eri oke batrị ahụ, yabụ ikike batrị kwesịrị ịbawanye iji wee nwee ike ịnwale ahụmịhe nnukwu njirimara nke S7 na-enye ndị ọrụ ya.
Na eriri afọ nke ọnụ, anyị nwekwara ike iche na anyị ga-ahụ Snapdragon 830, mgbawa nke ga-abụ emepụta na 10nm FinFET, nke kwesiri inye ezigbo arụmọrụ ma n'otu oge ahụ arụmọrụ ka ukwuu na ike oriri.
Obere ihe ọzọ anyị maara na ka ọnwa na-aga, anyị ga-anakọta ụfọdụ asịrị ndị metụtara Samsung Galaxy S8, ọnụ nke anyị nwekwara olile anya na na-accentuated ke imewe na Samsung wetara anyị ụfọdụ akụkọ na nke a, ebe ọ bụ na anyị nwere S6 na S7 nwere otu asụsụ na nke a ma ọ bụ karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S8 nwere ike inwe mkpebi UHD na nhazi igwefoto abụọ
Alberto Torres dijo
Ma egbula ihe a, ọtụtụ mobiles nwere igwefoto 2 na-eyi egwu
Zaghachi Alberto Torres
Ka anyị lee ihe ha mere! Ee, mana arụmọrụ bụ mgbe ahụ ka anụ ọhịa!
Ọ ga - abụ ekwentị kacha mma nke 2017 ... M ga - azụta ya, na s6 EDGE + ... M ga - enyefe ya nwunye m heh heh ...
Waze na-agbakwunye "Obe Ojuju"; n'oge naanị na Los Angeles